Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Pierre-Emerick Aubameyang Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
LB na-egosi Full Story of a football football onye kacha mara aha na aha njirimara; ''Auba'. Anyị Aubameyang Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya. Ka Anyị Bido.
Pierre-Emerick Aubameyang Nwatakiri Akụkọ - Nwata nwata:
A mụrụ Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang na Laval, France na 18 nke June 1989 site n'aka nna ya Gabon, Mr Pierre François Aubameyang "Yaya", onye bụbu onye na-agbachitere bọọlụ Gabon na nne Spanish, Oriakụ Margarita Crespo Aubameyang, onye nwe ụlọ ahịa / azụmahịa nwanyi.
Aubameyang bụ agbụrụ agwakọtara ọnụ nke na-ekenye ụmụ amaala French na Gabon. Obi abụọ adịghị ya, ọhụụ agbụrụ ya pụtara ìhè nke ọma na akpụkpọ oliv ya.
Dịghị mgbe ọ bụ nwata nọrọ na France na Gabon mgbe ọ na-etolite. A zụlitere ya na Milan, wheretali ebe nna ya rụrụ ọrụ maka AC Milan.
Pierre-Emerick Aubameyang bụ n'ezie nwa nke ndị ọgaranya. O nwere obi uto dika nwatakiri, nke otutu ndi nke ya choro.
Nicolas Pepe Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Inwe nna ochie nke nna ya nke na-abụ onye na-agba bọl maka otu n'ime ụlọ ọrụ kasịnụ n'ụwa bụ n'ezie uru maka Auba.
Pierre-Emerick Aubameyang Ndụ Ezinụlọ:
Nna ya (nke dị n'okpuru ebe a) bụ ọrụ maka ịzụlite na ịtụle talent football nke Auba.
Dịka onye isi AC Millan scout na nwoke nwere mmetụta nwere njikọ miri emi na football, idozi nwa ya 3 na ndị ọrụ ya n'ezie, abụghị ihe siri ike.
Alexandre Lacazette Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Pierre-Emerick Aubameyang na ndị nne na nna -Ndị ezinụlọ.
Okwesiri ikwuputa na Mr Pierre François Aubameyang nke a makwaara dika "Yaya" bụ otu n'ime ndị na-agbachitere kachasị mma n'Africa n'oge ya nke si 1982 ruo 2002.
O nyeere ndị otu mba Gabon aka na 1994 na 1996 Afrika Cup of Nations wee kpọọ ọtụtụ ndị otu egwuregwu na France. Nrọ ya mgbe nile bu ịzụlite ụmụ nwoke ndị ga-anọgide na-enweta ihe nketa Aubameyang.
Dị ka Nna Dị ka Nwa- Aubameyangs Aubameyang's Mum- Margarita.
ya nne, Oriakụ Margarita Crespo Aubameyang N'aka nke ọzọ na-akwado mkpebi nke di ya mgbe ọ bụla ka nwa ya rapara n'akụkụ ya nke akụkọ ntolite. Ọ bụ nwanyị French nke si Spain.
Ọ dị mkpa iji rịba ama na ọbara Spanish na-esikwa na Auba gbaa. Obodo nne ya nke El Barraco (nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke Madrid) emepụtala ọtụtụ ndị na-agba ọsọ ụkwụ na afọ ole na ole.
Pierre-Emerick Aubameyang Biography Eziokwu - Ọ bụ Ezinụlọ:
Ewezuga football, 'Auba', a na-akpọ ya dị ka nwoke zuru oke nke hụrụ n'anya ka ya na enyi ya nwanyị bụ Alysha na nwa ya nwoke nọ, Curtys onye ọ raara onwe ya nye Spiderman na emume batman ya.
Dị ka Auba si kwuo "Ishụnanya bụ ihe mara mma n'ụdị ya niile mana, ma eleghị anya, ụdị ịhụnanya nke kacha dị ịtụnanya na nke na-abụkarị ihe dị omimi bụ mmetụta nke Alysha na Curtys"
"Ọ na-enye m ezi mmụba," Nna ahụ dị mpako kwuru, bụ onye akpụkpọ ụkwụ ya na-ebukarị aha nwa ya nwoke "Curtys".
N'okwu ya, "Naanị nnukwu dike n'ụlọ bụ nwa m nwoke Curtys na anyị abụọ na-ekiri Batman na Spiderman na TV site n'oge ruo n'oge"
Pierre-Emerick Aubameyang Brothersmụnna:
O nwere ụmụnne nwoke toro eto abụọ bụ ndị na-agba ụkwụ na ụzụ. N'ezie, mmadụ atọ ahụ malitere ọrụ ha na AC Milan.
Ihe ị maghị gbasara ubmụnna Aubameyang.
Ọ bụ ezie na Pierre-Emerick enweela ọganihu, ndị ọzọ ka na-agbasi mbọ ike inweta otuto zuru ụwa ọnụ. Nwanne ya nwoke nke okenye bụ Catilina bụkwa onye mba Gabon, bụ onye gosipụtara ọnụ ọgụgụ dị nta n'etiti 2000s, ebe Willy bụ mba ụwa ma na-egwu egwu ugbu a na njikọ German.
Pierre-Emerick Aubameyang Bio - Nwa nke Papa:
N'adịghị ka ụmụnne ya, Auba bụ ọkacha mmasị papa ya. Ọ bụghị naanị na ọ na-asọpụrụ ya ma na-agbaso ndụmọdụ ya banyere azụmahịa na ihe gbasara ezinụlọ.
N'ihe banyere azụmahịa, Mkpebi Football metụtara mkparịta ụka mbufe na ịhọrọ klọb bụ maka nnukwu nna ya. Gị, mkpebi ndị emere ugbu a egosipụtala nke ọma.
Dịka ọmụmaatụ, ọ dị oge St Etienne chọrọ ire Auba na Newcastle. Papa ya jụrụ ma mee ka nwa ya nwoke kweta na Dortmund gafere.
Dabere na Auba, "Anyị ghọrọ onye ikpeazụ na Champions League n'ihi na nna m mụrụ egwuregwu Jurgen Klopp nke Dortmund, n'agbanyeghị na ego ahụ dị obere."
Ọsọ zuru oke:
Pace bụ ihe doro anya ị ga - akpakọrịta na Pierre-Emerick Aubameyang. Ike ya kasịnụ. Ọ dị oke ọsọ ọsọ na mkpụmkpụ ma dị ogologo ma nwee ike iburu bọl ahụ n'otu oge.
Ejirila Auba na mita 30 na 3.7 sekọnd. E kwuru na nke a ga-abụ ngwa ngwa karịa onye mmeri nke World Olympic 100 mita na njide ihe ndekọ ụwa - Usain Bolt.
Ọ bụ ezie na a mara ya aka na agba ọsọ 100 site n'aka onye German sprinter Julian Reus ma ọ kabatabeghị ihe ịma aka ahụ.
Pierre-Emerick Aubameyang Bio - Ọrụ Nke Oge:
Na 2007, e debere ya n'ime AC Milan agụmakwụkwọ site na nna ya, afọ ndị dike Italiantali ghọrọ ndị mmeri Europe. Ọ dịghị mgbe ọ bụla egwuru egwu maka Rossoneri ma ghara ịkwado onwe ya dị ka onye egwuregwu mbụ.
Kama nke ahụ, e debara aha ya na klọb French dị ka Dijon, Lille na Monaco. Na 2011, Saint Etienne bịanyere aka na ya na-adịgide adịgide ebe o meriri ihe mgbaru ọsọ 31 ma kpọọ ya Ligue 1 African Player nke afọ maka 2012.
O nwere nzuko na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ na onye nduzi Saint-Etienne Christophe Galtier. Dị ka onye nkụzi France,
“Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe niile gara nke ọma maka Auba na mbụ. Naanị otu ihe ka m hụrụ n'ime ya. Nke ahụ bụ ọsọ ya. Ahụrụ m n'oge ọzụzụ na ọ bụ ndị ọkaibe kachasị ọsọ m nwetagoro., "
Mgbe ọ dị afọ 20, Pierre na-egwuri egwu maka otu ndị France U-21 mgbe akpọrọ ya na mbụ Italian U-19.
Ọ kwagara na Borussia Dortmund nke Germany na 2013 wee bụrụ otu n'ime ndị na-agba ọsọ na Bundesliga. Auba sonyeere BVB na nkwekọrịta 13 nde kwuru.
Ọ bụ ezie na a mụrụ Pierre na France ma na-egwuri egwu maka Gabon dị ka onye isi ụgbọ mmiri iji mee ka agbụrụ Aubameyang nke nwanne ya nwoke nke okenye bụ Catalina mere. Ọ na-atọ ya ụtọ ma na-asọpụrụ ịmara ụmụ ya na-achọ i emomi ha.
Na-eme akụkọ ihe mere eme:
Aubameyang bụ onye ọkpụkpọ Gabon nke mbụ na-egwuri egwu na Bundesliga ma ọ bụ egwuregwu German ọ bụla.
Ọ malitere na August 10, 2013 mgbe ọ banyere Dortmund na July nke otu afọ ahụ. O nwere nrọ nke mbu site na isi ihe ojoo n'egwuregwu mbu ya, nke egwuru megide FC Augsburg.
Nakwa na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, Na July 2012, Aubameyang gara London iji gosi Gabon na Olympic Games.
Na egwuregwu mbụ megide Switzerland ọ meriri naanị ihe mgbaru ọsọ nke egwuregwu ahụ, nke ga-emesị bụrụ nanị ihe mgbaru ọsọ Gabon ga-enweta na asọmpi ahụ.
Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ mbụ na Gabon kachasị na Olympic. N'ịbụ onye meriri ihe mgbaru ọsọ 19, Pierre-Emerick Aubameyang bụ onye kachasị nwee goolu nke Gabon n'oge niile.
Pierre-Emerick Aubameyang arsgbọ ala:
N'iburu ọsọ ọsọ nke mba Gabon, ọ bụ ihe dị mma na ya kwesịrị ịnụ ụtọ ndụ na ngwa ngwa.
Hụnanya Aubameyang maka ụgbọ ala ndị mara mma.
“Ọ bụ ihe ọ havingụ inwe ụgbọ ala dị ka nke a,” ọ na-ekwu banyere Lamborghini Aventador gilded. Enwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ ndị Aubameyang na taya nke ụgbọ ala ya, ọ bụ ezie na ọ na-anya Lamborghini ugbu a.
A na-akpọkarị ya Mr Glamorous. Aubameyang abụghị ihe ọkpụkpọ gị nke ọ bụla na-eche n'echiche, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ akpụkpọ ụkwụ.
Na December 2012, ọ na-eyi akpụkpọ ụkwụ nke ejiri ihe karịrị 4,000 Swarovski kristal na atụmatụ nke gụnyere aha ya, nọmba ya na klọb klọọkụ ya na agba ya mgbe ọ na-ekpo ọkụ maka egwuregwu megide Olympique Lyonnais.
Pierre-Emerick Aubameyang Eziokwu SPIDERMAN:
Aubameyang nwere ahụmịhe gara aga ma a bịa n'ememe ndị isi. Homsọpụrụ a nye Spiderman sitere n'ike mmụọ nsọ nwa ya nwoke Curtys bụ onye na-anọdụkarị ala na oche iji lee dike ya na-egwu bọl.
Aubameyang gosipụtara ememme dị egwu maka nwa ya nwoke mgbe ọ gbasịrị Dortmund na 2014 Supercup megide Bayern.
Nwa ya nwoke bu onye nwere nnukwu obi uto na akwukwo ndi obi uto ma hu ka o puta n’ile Spiderman dika nna ya.
Pierre-Emerick Aubameyang Ememe Spiderman maka nwa ya nwoke.
Pierre-Emerick Aubameyang Eziokwu BATMAN:
Mgbe ọ na - enweghị ike ịchọta ngwa ngwa Spiderman, ọ na - atụgharịkwuru Batman.
Ememme Batman nke Auba.
Auba bụ onye na-akwado Batman. Ọ bụ nwoke mgbe niile na mgbakọ ọ bụla na-eyi uwe nwa ya nwoke. Nke a na-eme ka ọtụtụ ụjọ na ya ibu na Ọchịchịrị Ọchịchịrị.
A mara maka ikpuchi mkpuchi n'oge ememme:
Auba amare ya mgbe ọ bụla maka itinye ihe mkpuchi Nike-eme n'oge ememe.
Ememe Nkpuchi nke Auba.
A nụchara ụgwọ ahụ ihe ruru € 50,000. Emesiri gosiputa na nkpuchi ahu raara nye Nike Hypervenom Phantom akpụkpọ ụkwụ "Strike Night" ọ na-eyi.
Onye isi oche bụ Dortmund Hans-Joachim Watzke gwara magazin Kicker: 'Ọ pụghị ịbụ na Nike na-anwa ịkwalite ọdịmma akụ na ụba n'ụzọ dị otú a.'
Forhụnanya maka Africa:
Tatoo Auba nke Afrika na-edozi ahụ ya mma ma na-eme ka mkpụrụ obi ya nwee ịhụnanya maka kọntinent ahụ.
Ee ọ bụ Afrika, ọ bụghị n'ihi na a mụrụ ya Afrika, mana n'ihi na a mụrụ Africa na ya.
Hụrụ naanị football:
Ee ọ na-eyi akpụkpọ ụkwụ Crystal, ihe nkpuchi Spiderman, okpu Batman - na ileba anya mbụ. O doro anya na Auba bụ ụdị egwuregwu ama ama ama ama ama.
Mgbe ị nyochachara nke ọma, ị ga - achọpụta na onye ahụ na - awakpo abụghị onye ị chere na ọ nwere ike ịnọ n'èzí egwuregwu. Dị ka ezigbo enyi ya bụ Christophe si kwuo Jallet,
"Aubameyang bụ nwa nwoke dị jụụ, onye na-anaghị eleta ọgbakọ abalị, anaghị a drinkụ mmanya na-aba n'anya ma na-arọ nrọ mgbe niile".
Pierre-Emerick Aubameyang Stdị ntutu:
Auba na-echegbu onwe ya maka ntutu isi ya. Ọ bụ otu n'ime ndị na-agba ụkwụ ole na ole merụrụ ókèala Paul Pogba. Pierre-Emerick Aubameyang etinyewo Paul Pogba na ọkwa - ọ bụghị na olulu, kama ọ bụ egwuregwu ntutu ya.
Onye nwe edozi isi kachasị mma na football.
O nwere otu ntutu kachasị nwee ntutu isi n'etiti ndị na-agba ụkwụ.
Onye nkuzi Summersault:
Miroslav Klose na-eme ha, ugbu a Aubameyang na-emekwa ya. Ọ bụ ya somersaults. Pierre-Emerick Aubameyang agwala Egwuregwu Bild ọ maara na ọ na-eme ememe ememe “Adịghị emerụ ahụ” mgbe a gbara ndị ọsụ ụzọ bọọlụ Gabon na ndị ọkachamara ahụike ume ka ha kwụsị.
N'ezie, Auba na-ekpebi mgbe ọ bụla mgbaru ọsọ ọ bụla ma ma ọ bụ na ọ gaghị apụ, kama ọ na-eche na ọ ga-eme nke ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ daa.
Pierre-Emerick Aubameyang Crespo Eziokwu:
Enweghi ndi ozo n'uwa n'uwa ndi kwadoro aha ndi ozo n'eto ha. Auba bụ ihe ọzọ.
Dike nwata nke Aubameyang: Hernan Crespo.
Ọ na-ebu arụsị ya, nke ahụ bụ onye Argentina "Hernan Crespo" na aka ekpe ya. Akụkọ na-egosi na Hernan Crespo metụtara nne ya nke nwekwara aha ahụ.
Aubameyang bụ onye kwupụtara nkwenye nke Hernan Crespo wee kpọọ ya dị ka onye kachasị ihe nlereanya ya na egwuregwu ahụ.
Dabere na Auba, "Crespo dị ike, dị ike na ikuku, nke nwere ọgụgụ isi na nnukwu onye ọkpụkpọ," ọ gwara ya kicker. Auba na-etinye oge ka ukwuu n'ọzụzụ ọzụzụ ya na-ele nkà ịchụ nta nke Crespo.
Dabere na Auba, “Crespo bụ nkọwa nke onye nkuzi. Ọ naghị etinye aka na nrụpụta ahụ ma ọ nweghị mmasị dị ukwuu n'ịgbaso n'azụ usoro nchebe. Ọ na-eme obere mmegharị otu oge na mpụga igbe.
Mana n'ime igbe ahụ, ọ maara otu esi aga. Ọ maara ebe bọọlụ nke abụọ ga-akwụsị. Ọ maara otu esi erigbu ohere ọ bụla pere mpe nke fọdụrụ na igbe 6 yd. Ana m amụ kwa ụbọchị ịdị ka ya. ”
Anyị achịkọtala ọnụ ọgụgụ ewu ewu anyị maka Pierre-Emmerick Aubameyang.
Ụdị edemede Gabonese
Joel Campbell Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ nke Na-emeghe Ihe Akụkọ
Andrey Arshavin Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ